China 330kV tilikambo fiaran-dalamby dobo famokarana sy orinasa | XY Tower
330kV tilikambo fiaran-dalamby avo roa heny
Tongasoa eto hitsidika ny tranokalanay. XY Tower dia iray amin'ireo orinasa mitarika amin'ny indostrian'ny fananganana tilikambo any andrefan'i Sina.
XY Tower dia manome rafitra vy maro samihafa, manam-pahaizana manokana amin'ny tilikambo fampitana, firafitry ny substation, tilikambon'ny fifandraisana, sns. Miaraka amin'ny vondron'olona mpiasa manentana anay, dia manolo-tena izahay hanome ny vokatra tsara sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa rehetra. Manantena mafy ny fiaraha-miasa izahay.
Maninona XY Tower
fotodrafitrasa ny XY Tower：
Ny ivon'ny toeram-pamokarana rehetra dia ny fotodrafitrasa. XY Tower dia manana fahaizana apetraka hamokarana tilikambo 30.000 taonina isan-taona.
Vonona ny XY Tower hihaona amin'ireo fenitra manara-penitra indrindra manerantany.
Ny layout mahomby, ny fitaovana famokarana mekanika ary ny toerana fitehirizana lehibe ho an'ny vy dia manome vokatra kalitao XY Tower araky ny fepetra takin'ny mpanjifa henjana.
Ilay zavamaniry fanamboarana ao Chengdu dia natsangana tamina velaran-tany mirefy 35000 metatra toradroa. Izy io dia manambatra ny mpiasa mahay sy ny fotodrafitrasa famokarana maoderina mba hiantohana ny vokatra avo lenta.
Namboarina tamin'ny tany mirefy 7000 metatra toradroa hafa ho an'ilay zavamaniry mandrehitra.
Izy io dia mampiditra ny haitao farany indrindra ho an'ny galvanizing mafana amin'ny karazana rafitra maro.
Famaritana ny tilikambo
tilikambo fampitana dia rafitra matevina, mazàna tilikambo makarakara vy, ampiasaina hanohanana ny tsipika herinaratra ambony. Manome ireto vokatra ireto izahay amin'ny alàlan'ny
mpiasa mazoto manana traikefa lehibe amin'ity sehatra ity. Mandalo fanadihadiana amin'ny antsipiriany momba ny zotra, sarintany izahay, fitsangatsanganana tilikambo, firafitry ny tabilao ary antontan-taratasy teknika mandritra ny fanomezana ireo vokatra ireo.
Ny vokatray dia manarona ny 11kV ka hatramin'ny 500kV raha toa ka misy karazana tilikambo isan-karazany ohatra ny tilikambo fampiatoana, tilikambo fihenana, tilikambo zoro, tilikambo farany sns.
Ho fanampin'izany, mbola manana karazana tilikambo lehibe sy serivisy famolavolana omena izahay raha toa ka tsy misy sary ny mpanjifa.
Anaran'ny vokatra Tilikambo fampitana
Kilasin'ny herinaratra 220 / 330kV
Haavony nominal 18-48m
Isan'ny mitondra tarika 1-6
Hafainganan'ny rivotra 120km / h
Androm-piainana 30 taona mahery
Fenitra famokarana GB / T2694-2018 na mpanjifa ilaina
Akora Q255B / Q355B / Q420B / Q460B
Fitsipika ara-materialy GB / T700-2006, ISO630-1995; GB / T1591-2018 ； GB / T706-2016 na Ilaina ny mpanjifa
hateviny vy vy anjely L40 * 40 * 3-L250 * 250 * 25; Takelaka 5mm-80mm
Fomba famokarana Fitsapana ny akora → Fanapahana → Fametahana na fandohinana → Fanamarinana ny refy → Fantsom-bozaka / Fantson-tànana → Fanamafisana → Fanamafisam-peo → Fanarenana → Fonosana → fandefasana
Fenitra welding AWS D1.1
Fitsaboana ambonin'ny tany Mandroboka mafana
Fenitra nandrisika ISO1461 ASTM A123
Fastener GB / T5782-2000; ISO4014-1999 na Ilaina amin'ny mpanjifa
Naoty fanatanterahana 4.8; 6.8; 8.8
Piesy detase Bolt 5% no hatolotra
Certificate ISO9001: 2015
fahafahana 30.000 taonina / taona
Fotoana mankany amin'ny seranan-tsambon'i Shanghai 5-7 andro
Ora nanomezana Matetika ao anatin'ny 20 andro dia miankina amin'ny habetsahan'ny fangatahana
ny fandeferana amin'ny habe sy ny lanjany 1%
isa farafahakeliny 1 napetraka
1, Serivisy fandraisana mpanjifa. Faly be izahay fa mitsidika ny XY Tower ny mpanjifanay. Tianay ny hanome olona 2-3 trano hipetrahana sy fanampiana hafa ilaina amin'ny mpanjifa maimaimpoana.
2, Serivisy fitsangatsanganana fivoriambe. Raha toa ka mitaky ny serivisy fitsangatsanganana fivoriambe ny mpanjifa, na inona na inona mpanjifa tonga any amin'ny orinasa na tsia, dia hanao tranobe fihaonambe fitsapana izahay ary haka horonan-tsary ho an'ny tohiny.
3, Serivisy fanavaozana isan'andro: Vantany vao vita sonia ny fifanarahana, hatsangana ny ekipa mpanompo izay misy ilay olona avy amin'ny famokarana department departemanta marketing 、 QC. Ity ekipa natokana ity dia hanome tatitra isan'andro amin'ny alàlan'ny chat amin'ny WhatsApp na WeChat ary hamaly ny fanontaniana apetraky ny mpanjifa ara-potoana, amin'izay ny mpanjifa dia afaka manara-maso hatrany ny satan'ny famokarana.
4、5% fanampiny bolts & voanjo no homena maimaimpoana hahazoana antoka ny fametrahana.
5 、 Afa-tsy ny vokatra, XY Tower dia hanome ireto taratasy fanamarinana sy tatitra manaraka ireto
.Rakitera azo avy amin'ny vy vita amin'ny vy
Tatitra Reinspection .XY Tower Raw Material Reinspection
.Ny firaketana fanaraha-maso fizarana herinaratra avy amin'ny ekipa QC
Ny vokatra .XY Tower Qualified dia mamela ny fanamarinana ex-factory
.XY Taratasy nahazo mari-pankasitrahana Tower
. Taratasy niandohana
XY Tower dia manana protokolim-pitsapana tena henjana mba hahazoana antoka fa ny vokatra rehetra amboarinay dia kalitao. Ity dingana manaraka ity dia mihatra amin'ny fivezivezin'ny famokarana anay.
Fizarana sy takelaka
1. Fangaro simika (Fanadihadiana Ladle)
2. Fitsapana hozatra
3. Fitsapana Bend
Voanjo sy Bolt
1. Fitsapana ny valin'ny porofo
2. Fitsapana farany tanjaky ny hery mahery vaika
3. Fitsapana farany hery farany amina enta-mavesatra eccentric
4. Fitsapana miondrika mangatsiaka
5. Fitsapana mafy
6. Fitsapana galvanizing
Ny angona fitsapana rehetra dia voarakitra ary hotaterina amin'ny mpitantana. Raha misy lesoka hita dia hamboarina na esorina mivantana ny vokatra.
Ny kalitaon'ny galvanizing Hot-dip dia iray amin'ny herinay, ny CEO izay Andriamatoa Lee dia manam-pahaizana amin'ity sehatra ity manana ny lazany any Western-China. Ny ekipanay dia manana traikefa lehibe amin'ny fizotran'ny HDG ary indrindra amin'ny fikirakirana ny tilikambo any amin'ny faritra avo harafesina.
Fenitra nandrisika: ISO: 1461-2002.
Hatevina fonosana zinc
Kolikoly nataon'i CuSo4
Fepetra sy takiana
Zinc palitao tsy nendahina sy notezaina tamin'ny famonoana
Serivisy fivorian'ny prototype prototype maimaim-poana
prototype tower tower dia fomba iray tena nentim-paharazana nefa mahomby hijerena raha marina ny sary amin'ny antsipiriany.
Amin'ny tranga sasany, ny mpanjifa dia mbola maniry ny hanao prototype tower tower mba hahazoana antoka fa mety ny sary sy ny famolavolana antsipirihany. Noho izany, mbola manome serivisy fivorian'ny prototype prototype ho an'ny mpanjifa izahay.
Ao amin'ny serivisy fivorian'ny prototype prototype, XY Tower dia manolo-tena:
• Ho an'ny mpikambana tsirairay, ny halavany, ny toeran'ny lavaka ary ny fifandraisany amin'ireo mpikambana hafa dia hojerena tsara raha toa ka salama tsara izy;
• Ny habetsaky ny mpikambana tsirairay sy ny bolt dia ho voamarina tsara avy amin'ny faktioran-taratasy rehefa manangona ilay prototype;
• Hamboarina ny sary sy faktiora fitaovana, ny haben'ny bolt, ny filler sns raha misy lesoka hita.
Serivisy fitsidihan'ny mpanjifa
Faly be izahay fa mitsidika ny orinasanay ny mpanjifanay ary mijery ny vokatra. Tombontsoa lehibe ho an'ny roa tonta mba hifankahalala bebe kokoa sy hanamafisana ny fiaraha-miasa.Ho an'ny mpanjifanay dia horaisinay any amin'ny seranam-piaramanidina ianao ary hanome trano hipetrahana 2-3 andro.
Ny sanganasa rehetra amin'ny vokatray dia alaina araka ny sary antsipirihany. Ny kaody rehetra dia hapetaka tombo-kase vy amin'ny singa tsirairay. Araka ny kaody, ny mpanjifa dia hahafantatra mazava tsara fa singa tokana izay an'ny karazana sy fizarana.
Ny isa rehetra dia voaisa araka ny tokony ho izy ary fonosina amin'ny alàlan'ny sary izay afaka manome toky fa tsy misy singa iray tsy hita ary mora hapetraka.
Raha ny mahazatra, ny vokatra dia ho vonona ao anatin'ny 20 andro fiasana aorian'ny fametrahana. Avy eo dia maharitra 5-7 andro fiasana ny vokatra vao tonga ao amin'ny Port Port Shanghai.
Ho an'ny firenena na faritra sasany, toa an'i Azia afovoany, Myanmar, Vietnam sns, ny fiaran-dalamby mpitatitra entana China-Europe sy ny kalesy an-tanety dia mety ho safidy roa fitaterana tsara kokoa.
Previous: Tilikambo fihenam-bidy miisa 500kV
Manaraka: 330kV tilikambo avo roa heny tilikambo Y-type